मधेशमा एमालेको जनाधारमा ह्रास आएको छ : कासिन्द्र यादव
० अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
— नेपालको राजनीतिमा एक दशकदेखि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित थियो । र अहिले आएर त्यो चरण मोटामोटी पुरा भएको छ । नेपालले एउटा संविधान पाएको छ । जुन अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पुगेको छ । जसअन्र्तगत पहिलो र दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र अब तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि जुन पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाएको थिएन, त्यो तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाएसँगै संविधानको कार्यान्वयनको सम्भावना बढेर गएको छ । त्यो सन्दर्भमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया एउटा विधिवत रूपमा पुरा भएको छ । तर मधेश जो लामो कालखण्डदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको थियो त्यसका स्टेक होल्डरहरू बाध्यताले वा परिस्थितवश चुनावमा सहभागि भएपनि मूल माग पुरा भएको छैन । जबसम्म मूलभूत एजेण्डा र यथार्थपरक एजेण्डा जीवित हुन्छ, तबसम्म राजनीति कुनै न कुनै हिसावमा विग्रह वा आन्दोलनको राजनीतिक जीवित हुन्छ । अहिले मधेश आन्दोलनको अवसान एवम् स्थगन भएका छन् तर यो कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन बाँचेकै अवस्था छ ।
० संशोधन विधेयक संसदबाट पास नहुँदै राजपा नेपाल तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी भयो, यो निर्णय कस्तो लाग्यो तपाइँलाई ?
— हैन, राजपा नेपालको बारेमा हाम्रो पहिलेदेखि स्पष्ट धारणा छ । राजपा नेपाल चुनावमा जानु कुनै अनौठो परिघटना होइन । राजपा नेपाल र मधेशवादी दलहरू सुरूदेखि नै सत्ता र संघर्षको राजनीति गरिरहेका छन् । यिनीहरूको चरित्र, यिनीहरूले बोकेको एजेण्डा र यिनीहरूले लिएको संकल्पहरूको अध्ययन गर्दा राजपा नेपालसँग धेरै विकल्प बाँकी थिएन । या त राजपा नेपाल जे जसरी भएपनि समर्पण भावले चुनावमा सहभागी हुनु पथ्र्यो या सहादत दिनु पथ्र्यो । त्यसकारण राजपा नेपाल अन्तोगत्वा चुनावमा सहभागि हुनु पथ्र्यो । किनभने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आफूलाई चुनावी शक्तिको रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । त्यसकारणले अबको राजनीतिकमा मधेशमा राजपा नेपाल वा फोरमको राजनीतिक औचित्य छैन भन्नु अतिवाद हुन्छ । यिनीहरूको महत्व हुन्छ । तर मधेशका मूलभूत माग जो अहिले पनि बाँकी छ त्यो पुरा गराउने क्षमता यिनीहरूसँग छैन । तर यिनीहरूको उत्प्रेरक शक्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ।
० टिकट वितरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीभित्रै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्, शहिदहरूको सहादतको कुनै कदर नभएको गुनासाहरू पनि छन् । यसमा तपाइँको के प्रतिक्रिया छ ?
— आजको राजनीतिको समान्य ट्रेन्ड के देखिन्छ भने प्रत्येक पार्टीले पुराना कार्यकर्ताको योगदानभन्दा पनि को चुनाव जित्न सक्छन्, को बढीभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् त्यसमा बढी ध्यान दिएको छ । समग्रमा चुनाव जित्ने प्रक्रियामा केन्द्रित भएको छ । किनभने सत्ता प्राप्तिको सबभन्दा उपयुक्त बाटो नै चुनाव जित्नु हो । तर, यसको नकारात्मक प्रभाव के छ भने चुनाव जितेपछि राजनीतिक सेटअप लिएपछि जुनसुकै रूपमा चुनाव जित्नु भनेको लोकतन्त्रको मूलमन्त्र नष्ट भएको छ । टिकट नपाएर कार्यकर्ता पार्टी छोडिरहेका छन् । त्यस हिसाबले के भन्न सकिन्छ भने क्रान्ति र आन्दोलन यदि असफल भयो भने त्यसको जगमा स्वार्थवाद र अवसरवाद जन्मिदो रहेछ । किनभने सार्वजनिक मूल्यमा सबैले जोखिम लिएको हुन्छ त्यो पुरा भएन भने सबै व्यक्तिगत रूपमा केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको प्रक्रिया पनि राजनीतिक मूल्य भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नमा हावी भएको छ । आजको दिनमा टिकट पाउनु, चुनाव लड्नु र चुनाव जित्नु नै त्यसको मूख्य एजेण्डा भयो । यो मधेशवादीमा अलि बढि नै देखिन्छ । अर्को कुरा के छ भने आजको बजारवादले के कुरा स्थापित गरेको छ भने हाम्रो अर्थव्यवस्थामा जुन परिवर्तन आएका छन् त्यसमा यो दलाल अर्थतन्त्र र रेमिटान्सको भरमा टिकेका अर्थतन्त्रको मनोविज्ञानको विकास भइरहेको छ । हिजोको दिन जमिन, जागिर र पेशाले स्टाटस निर्धारण गरिन्थ्यो त्यो आज रहेन । आज मूख्य विषय पैसा जसरी पनि कमाउनु नै रहेछ । त्यसकारणले वडाध्यक्षमा भएपनि यसमै चुनाव लड्न मरिहत्ते गरेका छन् ।
० प्रमुख ठूला दलसहितको राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको रणनीति बनाएर चुनावी मैदानमा गएका छन् त्यसलाई हेर्दाखेरी प्रदेश नं. २ को राजनीतिक कुन कोर्सतिर गइरहेको जस्तो लाग्छ ?
— नेपालको राजनीति एउटा चरण पुरा गरेका छ, संविधान निर्माण र यसको कार्यान्वयन । यसलाई हेर्दाखेरी त्यसरी नै मधेशवादी दलको एक दशकको आन्दोलनको पनि एउटा कोर्स पुरा भएको छ । अहिलेसम्म सत्ता र संघर्ष समानान्तर रूपमा मधेशवादी दलले अघि बढाउँदै लगिरहेका थिए त्यो अब चुनावी राजनीतिमा सीमित भए । मधेशको राजनीतिमा सद्भावनाको राजनीति थियो त्यो फेरि अहिले सुरू भएको छ । मधेशको मुद्दालाई बोकी राख्ने चुनाव लड्ने र राजनीति गरिराख्ने यिनीहरूले गरिरहेका छन् । अव यिनीहरूमा मधेशको मुद्दालाई पुरा गराउने हैसियत छैन । त्यसैले नयाँ निर्माणको मनोविज्ञान जो अहिलेसम्म बाँकी छ त्यसमा टिकेर मधेश मुद्दालाई गम्भिरतापूर्वक पुरा गराउनका लागि एउटा नयाँ शक्ति जन्म लिनुपर्छ ।
० अहिले सबै मधेशवादाी भनाउँदा दलहरूले आफ्ना पार्टीबाट ‘मधेश’ शब्द हटाइसकेका छन् । फेरि तराई मधेशको राजनीतिमा प्रमुख ठूला पार्टीहरू नै हाबी भएको देखिन्छ । अब तराई–मधेशको भविष्य के हुनेछ ?
— यो चिन्ताजनक विषय हो । अहिलेको परिस्थितीमा नेपालको राजनीतिमा हित गर्ने र मधेशको हित गर्ने मध्यम धारको निर्माण भएको थियो, जसको प्रतिनिधित्व मधेशवादी दलहरूले गरिरहेका थिए । तिनीहरूको अवसानले मधेशमा दुइओटा ट्रेन्डको विकास गरेको छ । एउटा मधेशमा तीन प्रमुख पार्टीहरू हाबी भइरहेको छ । अर्को युथहरूको ठूलो तप्का अब यो देशमा मागेर हुँदैन यो देशसँग छुट्नु पर्छ त्यो प्लेटफर्ममा जाने तीब्र रूपमा विकास भइरहेको छ । यी दुबै मधेशलाई अझै संकटमा पार्नेतिर लगिरहेको छ । २००८ सालदेखिको मधेशको मागमा गुणात्मक रूपमा केही फरक आएको छैन । अहिले इतिहास आफूलाई दोहो¥याइरहेको छ । प्रतिरोधी शक्तिको रूपमा लामो समयसम्म आफूलाई कायम राख्न सकिएन । आजको दिनमा इतिहास दोहो¥याइरहेको छ र यो त्रासदी हो । मूलधारको राजनीतिक शक्ति नै मधेश समस्याको समाधान हो । त्यसकारणले त्यो शक्ति जन्मिनु पर्दछ । सुरूदेखि नै मधेश राजनीतिमा समस्या छ । मधेशको मुद्दा अहिले पनि पहँुच, प्रतिनिधित्व र पहिचानमा केन्द्रित छ । यो मुद्दालाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा समावेश गर्न सकिएन । त्यो सिद्धान्त सफल पनि हुँदैन । किनभने राज्यको जुन मनोविज्ञान छ त्यो आन्तरिक रूपमा मधेशलाई शत्रु ठान्ने र बाह्य रूपमा भारतलाई दुश्मन ठानेर बिम्ब राष्ट्रिय मनोविज्ञानको निर्माण भएको छ । यो राष्ट्रलाई पुनर्निर्माण नगरेर वा मधेशमा अलग राष्ट्रियताको परिकल्पना नगरेर समस्याको समाधान हुँदैन । जुन एकात्मक राष्ट्रियता छ त्यसलाई बहुराष्ट्रिय नबनाएसम्म र फरक युनिट तयार नपारेसम्म मधेशको समस्याको समाधन हुन सक्दैन । त्यसकारण एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी बहुराष्ट्रियको परिकल्पना गरि समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसरी समस्याको समाधान गरियो भने मधेशले समाधान पनि पाउँछ र मधेशको समस्या मूलभूत रूपमा सम्बोधन पनि हुन्छ । यसमै केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
० नेकपा एमालेको दुई नं. प्रदेशमा कस्तो जनाअधार रहेको छ ? एमाले प्रति तराई मधेशको जनताले कस्तो दृष्टिकोण बनाएको छ ?
— प्रदेश नं. दुईको परिप्रेक्ष्यमा एमालेको जनाअधारको कुरा गर्ने हो भने त्यो निश्चित रूपमा ह्रास आएको भन्न सकिन्छ । किनभने मधेश प्रतिको एमालेको जुन धारणा थियो त्यो मधेशी जनताले मूल्याङ्कनका साथ नियालीरहेका छन् । संविधान संशोधन हुन नदिनका लागि दोषी पार्टीको रूपमा एमालेलाई नै मधेशी जनताले मानेका छन् । त्यसैले एमालेको अवस्था दुई नम्बर प्रदेशमा त्यति राम्रो मान्न सकिदैँन ।
प्रकाशित मिति : २०७४ भाद्र २३ गते शुक्रबार